Home » XAYEEYSIINTA	XAYEEYSIINTA	Daawo Koox faneed cusub iyo dardar xoog leh xiddigaha FanSoor.
Yaxye Fantastic 16/07/2016	416 Views FanSoor Daawasho wacan!
KUSO DHAWADA XAFIISKA SHAQADA SOMALIDA DALKA NORWAY
Mama sara 09/03/2016	330 Views KUSO DHAWADA XAFIISKA SHAQADA SOMALIDA DALKA NORWAY Kuso dhawada xafiiska shaqada somalida dalka Norway Somalisk jobbklubb waa urur ka cawiya somalida ku nool dalka Norway arimaha shaqada iyo Nav. Hadafka ururka Somalisk jobbklubb waa sidi somalida loogu dhiiri gelin laha suuqa shaqada dalka Norway. Hadi aad ku noshahay dalka Norway waxan ka cawindona khorista CV ka dirista codsiyada shaqoyin ...
The Unit Show Holland Hal maalin baa hartay!
Yaxye Fantastic 11/02/2016	226 Views Xalfad loogu magac daray Unit Show Holland oo ka dhici doonta waddanka Nederland gaar ahaan Amsterdam 13/Sabtida ina soo haaysa oo ka dhiman kaliya hal maalin ayaa si wanaagsan loo soo agaasimay. Xalfaddaan ayaa loogu talagalay dhiira gallinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo in aay soo bandhigaan fankooda muga weyn, dhallintaan ayaa isku howlay in aay usoo bandhigaan taageeradooda heesahooda iyo waliba ...
FIIRSO Sawiro: Hardan adag oo dhexmaray Maroodi iyo Lo’Kisi..
Bilaal 02/02/2016	510 Views Xeradda lagu xannaaneeyo Duur-joogta ee Massai Mara ee dalka Kenya waxaa ku nool Xayawaanaadkii ugu khatarsan Duur-joogta. Sawir-qaade lagu magacaabo Kimberly Maurer oo 56 jir oo Safar Dalxiis ku marayey Xeradaasi ayaa waxa uu Sawiro La-yaab mudan ka soo qaaday Hardan dhex maray Maroodi iyo Lo’ Kisi “Buffalo”. Hardanka Labadaasi Xayawaan ayaa waxa ugu daran qaabka Maroodiga u qaaday Lo’da ...
Xaflad aad u qiima badan oo loogu magac daray “UNIT SHOW” 2016
Yaxye Fantastic 25/01/2016	184 Views Unit Show in Holland, Show aad loo soo agaasimay ahna mid aad loo wada sugayay ayaa wuxuu ka dhici doonaa Waddanka Holland gaar ahaan Amsterdam oo ah magaala madaxda waddankaas. Show-gaan ayaa ah mid ka duwan show-yadii horay loogu qaban jiray yurubta, kaasoo kaga duwan xaqiiqdii dhankasta, Show-gaan ayaa qaas ahaan loogu tallagalay in loo sameeyo is dhexgalka fannaaniinta Soomaaliyeed ...
Wargelin: Xafladda Xuska Nebiga(csw) ee Magaalada Zurich Switzerland.
Bilaal 07/01/2016	193 Views Wargelin: Xafladda Xuska Nebiga(csw) ee Magaalada Zurich Switzerland. Waxaa maamulka Masjidu Raxma ee magaalada Zurich ee dalka Switzerland idiin soo qabanqaabiyey, Xafladda xuska Maalinta dhalashada nebiga csw(Mawliidu Nebi) oo la qaban doono maalinta sabtida ah ee taariikhdu tahay 09.01. 2016ka. Waxay gudida Masjidu raxma ku casuumeen Culimo waaweyn oo dalka iyo dibadda caan ka ah ayaa sidii caadadu ...
Hamoogaan Xafladda Fannaaniinta reer Holland iyo Habeenka Mandeg Nur Garaash.
Yaxye Fantastic 23/12/2015	187 Views Read More »
Wargelin Bandhigga Buugga” Nasiibka Nolosha” Zurich Switzerland.
Bilaal 07/10/2015	331 Views Mudane/Marwo; Waxaa sharaf weyn noo ah, in aad naga la soo qaybgasho, munaasabad lagu soo bandhigayo buugga; “NASIIBKA NOLOSHA” oo lagu qabandoono magaalada Zurichn, ee dalka Switzerland. Munaasabaddu waxay u dhicidoonta sidan:- 1. Erayga qoraaga. 2. Dhiirrigelinta qoraalka, aqriska iyo barashada afka. 3. Dood iyo faallayn ku saabsan buugga iyo aragtida ka qaybgalayaasha. 4. Casho iyo cunto fudud. Goobta: ...
Faah Faahin ka soo baxeysa weerar lagu qaaday Hooyga gudoomiye Ganey..
Bilaal 01/10/2015	190 Views Ururka Al-shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada weerar xoogan oo lagu qaaday degmada Jalalaqsi Gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Weerarka ayaa si gaar ah ugu dhacay Guriga gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Axmed Ganey halkaasi oo dagaalyahanadii Al-shabaab iska caabin kala kulmeen ilaaladii gudoomiyaha oo Xilligaasi Hooyga ku sugnaa. Dagaalka ayaa dhacay Xalay saqdii dhexe. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee Dowlada Federaalka ...
Wargelin: Bandhigga Buugga “Nasiibka Nolosha” ka soo qeyb gal wacan.
Bilaal 09/09/2015	416 Views Wargelin: Waxaa soo dhammaatay daabacaadii iyo hawshii Buuggii Nasiibka Nolosha, ee uu qoray Qoraa sare Axmed Xaayoow” Ahmed Hayow. Haddaba Bahda qoraalka jecel, waxaan ku wargelinaynaa, in Daahfurka iyo Bandhigga koowaad ee Buugga lagu qabanayo, Magaalada Stockholm ee dalka Sweden Waxaa noo sharaf ah inaad nagala soo qayb gashaan, si aan uga faa’iidaysano nuxurka Buugga la billaabay 1975 lana daabacay ...
Page 1 of 212	»	Adver